यस्तो छ, समाजवादी पार्टी, नेपालको घोषणा पत्र - Sainokhabar
होमपेज / राजनीति / यस्तो छ, समाजवादी पार्टी, नेपालको घोषणा पत्र
यस्तो छ, समाजवादी पार्टी, नेपालको घोषणा पत्र
नेपाली समाज परिवर्तनकालागिलामो समयदेखि नेपालीजनताले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । प्रत्येक सङ्घर्षले नेपालीजनताको राष्ट्रिय स्वाधिनता, लोकतन्त्र र सामाजिकन्यायको आन्दोलनमा केही न केहीनवीनउपलब्धिहरू हाँसिलभएका छन् । सन् २००६ (वि.सं. २०६२÷६३ साल) को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसको पूरकको रूपमाभएको मधेस जनविद्रोह तथाआदिवासीजनजाति, खस, थारु, शिल्पी÷दलितलगायतका उत्पीडित समुदायले गरेको आन्दोलन त्यसको विकसित रूप हो । तर यीकुनै पनिआन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिले सम्पूर्ण क्रान्तिको रूप लिन सकेन । सबै आन्दोलनहरू सम्झौतामा टुङ्गीए । दशवर्षेजनयुद्वपनि यसरी नै सम्झौतामा टुङ्गिए । यसको बावजुद सन् १९५० (वि.सं. २००७ साल) को आन्दोलनले जहाँनिया राणा शासनको अन्त्यग¥यो भने सन् १९९० (वि.सं. २०४६ साल) को आन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीयप्रजातन्त्रको स्थापनाग¥यो । सन् २००६ को जनक्रान्तिले सामन्ती राजतन्त्रको उन्मुलन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ । सन् २००६ को जनक्रान्तिको सफलता नेपाली जनताको ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यस क्रान्तिपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता यो क्रान्तिका मुख्य तीन उपलब्धिहरू हुन । यस क्रान्तिको जगमा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरू, दशवर्षे जनयुद्व र सङ्घीयताका लागि उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले गरेका सङ्घर्षहरू रहेका छन् । यस अर्थमा अहिले हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ । यो सङ्घर्ष अहिले पनि जारी नै छ ।
नेपाली समाज मूलतः बहुराष्ट्रिय समाज हो । आजसम्म नेपाली समाज परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा सबै जाति÷समुदायको सहभागिता रहेको छ । तर परिवर्तनपछि त्यसको उपलब्धीहरूमा सबैको समान स्वामित्वबोध हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेशसँगै बहुराष्ट्रिय सङ्घीय राज्यको अभ्यासबाट सबै जातिले न्याय, स्वतन्त्रता र समान अधिकार उपभोग गर्न सकोस र स्वामित्वबोध गर्न सकोस भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ । सन् २००६ को जनक्रान्तिपश्चात नेपाली समाजपुँजीवादी युगमा सङ्क्रमण भएको छ । उक्त क्रान्तिले नेपालमा राजतन्त्र र जनताबिचको सङ्घर्षमा जनताको विजय उद्घोष गरेको छ । २५० वर्षदेखि स्थापित सामन्ती राजतन्त्रको उन्मुलन भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुले देशको सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थामा रहेको पुँजीवादको प्रभावलाई अझ फराकिलो बनाइदिएको छ । जनताले जनताका निमित्त जनताबाटै शासन गर्ने नेपाली जनताको युग युगदेखिको चाहना साकार भएको छ ।राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना हुनु युगान्तकारी महत्त्वको घट्ना भए पनि सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा प्रगतिशील रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण काम भने अझै बाँकी नै छ । त्यसरी नै पुँजीवादी क्रान्तिकै उपजको रूपमा सबै क्षेत्रमा सबै नागरिकहरूको समानता, बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुरूप सङ्घीय शासन, राष्ट्रिय पहिचान, सहि अर्थमा धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषिक समानता, सामाजिक विभेदबाट मुक्ति हासिल भइसकेको छैन ।श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको चाहना पूरा भएको छैन । शासक वर्गको जातीय अहङ्कार र अधिपत्यका कारण उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको आकाङ्क्षा पनि पूरा भएका छैनन् । त्यसैले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति अझै जारी छ ।
कुनै पनि देशमा क्रान्तिको जनादेश युग युगसम्मका लागि हुन्छ भने निर्वाचनबाट प्राप्त मत आवधिक हुन्छ । तर नेपालमा क्रान्तिको जनादेशलाई कार्यान्वयन नै नगरी देश द्वन्द्वरत अवस्थामा बहुमतका नाममा गणीतीय आधारमा नेपालको संविधान–२०७२ जारी गरियो । यस संविधानले आधारभूतलोकतन्त्र र मौलिकहक स्थापित गरे पनि उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र अधिकार लगायतमधेस जनविद्रोहको परिणामस्वरूप स्थापित सङ्घीयता र आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न समुदायहरूसँग भएको सम्झौता अनुरूप राष्ट्रिय पहिचानलाई मान्यता दिएको छैन । आन्दोलनकारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने नाममा भएको संविधानको पहिलो संशोधन पनि सहमतिमा नभई एकपक्षीय रूपमा नै गरे । संविधान बनाउने भनेको देशको मूल कानुन बनाउने मात्र होइन, देशको राजनीतिक र सामाजिक सन्तुलन प्रतिविम्वीत गर्ने दस्तावेज पनि हो । यो राज्यको चरित्र निर्माण गर्ने र समाजमा विद्यमान विभिन्न शक्ति र वर्गको अधिकार बाँडफाँट गर्ने पनि हो । यस महत्त्वपूर्ण कार्यमा राज्य चुकेको छ । त्यसैले क्रान्तिका उपलब्धीहरू ठीक ढङ्गले संस्थागत हुन सकेनन्, संविधानअधुरो र त्रुटीपूर्ण बन्यो । तसर्थ जनसङ्घर्षको विकास र संविधान संशोधनमार्फत् यीकार्यभार पूरा गरी देशलाई आर्थिक विकास र संमृद्धिको युगमाप्रवेश गराउनु आजको मुख्य राजनीतिककार्यभार बनेको छ ।
समाजको चरित्र निरुपण गर्ने आधारभूत तत्त्व उत्पादन पद्दति हो । उत्पादन पद्वतिको हिसावले नेपाली समाज अहिले सामन्तवादबाट पुँजीवादमा सङ्क्रमणको अवस्थामा रहेको छ । गत क्रान्तिपछि राज्यको उपरी ढाँचा पुँजीवादी बनेको छ तर सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पुरानो सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध पूर्ण रूपले समाप्त भइ सकेको छैन ।पुँजीवादको विकाससँगै नवउदारवादी खुला बजार अर्थतन्त्र प्रभावशाली बन्दै गएको छ । नेपाली समाजमासामन्तवाद पतनोन्मुख र पुँजीवाद उदीयमान छ । यहाँ श्रम र पुँजी, उपरी ढाँचा र आर्थिक सम्बन्ध, राज्यसत्ता र उत्पीडित राष्ट्रियता, विकसित क्षेत्र र पिछडीएको क्षेत्र, पितृसत्ता र लैङ्गिक समानता, परम्परागत मान्यता र अग्रगामी सोच, भूमण्डलीकरण र राष्ट्रिय हित जस्ता आधारभूत अन्तर्विरोधहरू रहेका छन् । त्यसलाई सुत्रीकृत गर्दा वर्गीय, राष्ट्रिय÷जातीय र वाह्य÷भू–राजनीतिक तीन मुख्य अन्तर्विरोधहरू रहेका छन् । नेपाली श्रमजीवी वर्गमाथि पुँजीपति वर्गबाट भएको उत्पीडन वर्गीय अन्तर्विरोध हो । यो नेपालमा विकसित उत्पादक शक्ति र पछाडि परेको आर्थिक सम्बन्धको कारण उत्पन्न भएको अन्तर्विरोध हो, जसको समाधान पुरानो उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तनबाट मात्र हुन सक्दछ । दोस्रो अन्तर्विरोध उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमाथि एकल राष्ट्र–राज्यको नाममा राज्यसत्ताबाट भएको उत्पीडन राष्ट्रिय अन्तर्विरोध हो । यसको समाधान पहिचानसहितको सङ्घीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागितामूलक समावेशी राज्यको निर्माणले मात्र हुन सक्दछ । त्यसरी नै नेपालको भू राजनीतिक स्थिति, वित्तीय पुँजीवाद र भूमण्डलीकरणका कारण राष्ट्रिय हितमाथि वाह्य शक्ति राष्ट्रहरूबाट हुने नियन्त्रण र हस्तक्षेप वाह्य÷भू–राजनीतिक अन्तर्विरोध हो । यो तेस्रो अन्तर्विरोधको समाधान बहुलतायुक्त प्रगतिशील राष्ट्रवादमा आधारित स्वाधीनताको अवधारणाले गर्ने छ ।
अहिले नेपालमा आर्थिक असमानता तथा गरीब र धनीबिचको खाडल बढ्दै जानु, विकास र सुशासनमैत्री पुनर्संरचना हुन नसक्नु, राज्ययन्त्रमा एकल जातीय नेतृत्व र वर्चश्व रहनु, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता हुनु, नैतिक मूल्य र सदाचारमा आधारित कार्य संस्कृतिको विकास नहुनु, अर्थतन्त्रमा माफिया र गिरोहतन्त्र हावी हुनु, देशभित्र निरपेक्ष गरीबी र बेरोजगारीको समस्या व्यापक हुनु र उत्पादनशील श्रमशक्ति ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिनु जस्ता समस्याहरू देखा परि रहेका छन् । यी सबै समस्याहरूको केन्द्र सामन्ती पुर्नउत्थावादी, कमिशनखोर तथा एकाधिका® पुँजीपति वर्ग र एकल जातीय अधिपत्य रहेको राज्यसत्ता हो । त्यसैले तिनीहरूसँग जनताको अन्तर्विरोध अहिलेकोे प्रमुख अन्तर्विरोध हो । यो अन्तर्विरोधहल नगरी देशमा आमूल परिवर्तन हुन सक्दैैन र माथि उल्लेखित अन्तर्विरोधहरू पनि हल हुँदैनन् । त्यसैलेनेपाली क्रान्तिका कार्यभारहरू पूरा गर्न राज्यको अग्रगामी परिवर्तन र रूपान्तरण हुनु पर्दछ र यससँगै देशलाई द्रुत गतिमा आर्थिक विकास र समृद्विको मार्गचित्रमा अगाडी बढाइनु पर्दछ ।
नेपालमा विश्वमा पाइने प्रायः सबै नश्लका मानव समूहहरू रहेका छन् ।गोर्खा राज्य विस्तारसँगै आधुनिक नेपाल निर्माणपूर्व नेपाल राज्य एकात्मक र केन्द्रीकृत थिएन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा साना ठूला राज्यहरू थिए, जुन कतिपय राष्ट्र–राज्यको रूपमा विकास भइसकेका थिए भने कतिपय विकास हुने क्रममा थिए । तत्कालिन नेपालमण्डल तुलनात्मक रूपमा विकसित थिए भने लिम्वुवान, किरात, मिथिला, मगरात, खसान जस्ता राज्यहरू राष्ट्रिय राज्यको रूपमा विकसित हुने क्रममा थिए । तामाङ, गुरुङ, शेर्पा जस्ता कतिपय समुदायहरूको राष्ट्रिय राज्य विकास नभए पनि ससाना ग्रामीण गणतन्त्रहरूको उदय हुँदै थिए । त्यसरी नै तराइ÷मधेस र थरुहटमा पनि विभिन्न गणराज्यहरू थिए । यी मध्ये कतिपय राज्यहरू आफ्नो मौलिक प्रकृतिका खुकुला महासङ्घीय ढाँचाका राज्य समूहहरू थिए । तर आधुनिक नेपाल निर्माणपछि तिनीहरूको पहिचानलाई समाप्त गरी एकल राष्ट्रिय राज्यको नीति अगाडि सारियो । आफ्नै भुमिमा तिनीहरूको अस्तित्व समाप्त गर्ने काम भयो । नेपालको राज्यसत्ता वर्ण व्यवस्थामा आधारित उच्च जातीय अहङ्कारवादको पर्याय बन्न पुग्यो । सन् २००६ को जनक्रान्ति, जनयुद्व, मधेस जनविद्रोह र आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनले नेपाललाई केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचावाट राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयागले पहिचान र सामथ्र्यताको आधारमा राज्य पुनर्सरंचना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरूले संविधान निर्माण गर्दा प्रशासनिक सङ्घीयताको मार्ग अबलम्बन गर्न पुगे । जातीय उत्पीडनबाट उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई मुक्त गर्ने काम भएन । हामी सवै राष्ट्रियताहरू, भाषिक समुदाय र उत्पीडित क्षेत्रको पहिचान र अधिकार सहितको सङ्घीय एकाइ÷प्रदेशहरू, स्वायत्त क्षेत्रहरू, संरक्षित क्षेत्रहरू र विशेष क्षेत्रहरू निर्माण गर्न र नेपाललाई साँचो अर्थमा सङ्घीय राज्य बनाउन प्रतिबद्व छौँ । पहिचानसहितको सङ्घीयता भन्नु जातीय राज्य नभई केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशहरूमा स्वशासन भएको सङ्घीय व्यवस्था हो । सङ्घीय राज्यमा दुई अलग तर स्वायत्त तहमा राजकीय सत्ता र शासनाधिकारको बाँडफाँट भएको हुन्छ । केन्द्रमा साझा राज्य र प्रदेशहरूमा स्वायत्त राज्य हुन्छ । नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा यसले ठूलो महत्त्व राख्दछ ।
विश्वमा समाजवादको उदय पश्चिीमका राष्ट्र–राज्यहरूमा भए । त्यहाँ एक राष्ट्र एक देश भएकाले नेपालमा जस्तो जातीय समस्याहरू थिएनन् । वर्गीय समस्याहरू हल गर्नु नै त्यहाँका समाजवादीहरूको मुख्य कार्यभार बन्यो । तर नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबिच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने साम्यवादको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले वर्गीय मुद्दाहरूमा मात्र जोड दिए । त्यसैले नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू पटकपटक सत्तारुढ हुँदा पनि यहाँका उत्पीडित राष्ट्रियताहरू मुक्त भएनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यमा सङ्घीयता बिनाको समाजवाद प्राण विनाको शरीर जस्तो हो । त्यसैले नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा समाजवादको आफ्नो मौलिक बाटो हुनु पर्दछ । सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको समाजवाद हाम्रो मौलिक बाटो हो । हामीले सङ्घीयतालाई देशका उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमाथि भइरहेको विभेद मुक्तिको आधारको रूपमा र समाजवादलाई श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको आधारको रूपमा लिएका छौँ । सङ्घीय शासन प्रणाली यसको रूप हो भने समाजवादी सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था यसको सार हो ।सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा जनताले राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रता र आर्थिक रूपमा समानताको अनुभव गर्ने छन् । समतामूलक समृद्धि, सम्पन्नता र राष्ट्रिय एकता यसको ध्येय हो । यसले समग्रमा नेपाललाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय सबै खाले विभेदहरूबाट मुक्त गर्ने छ । हामीले यी विषयहरूलाई सूत्रवद्व गरी राष्ट्रिय मुक्तिका लागि सङ्घीयता र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवादको नारा अगाडि सारेका छौँ । सङ्घवाद र समाजवाद यसका दुई मुख्य आधार हुन् । हामीले यी दुर्ईवटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटेर नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा सम्मुुनत सङ्घीय समाजवाद प्रस्तुत गरेका छौँ ।
कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको लक्ष्य देशको विकास र जनताको समृद्वि हो । अहिलेसम्म हामी राजनीतिक व्यवस्था बदल्न लागेका छौँ, अव अवस्था बदल्न लाग्नु छ । एकाइसौँ शताब्दीले विज्ञान र प्रविधि खासगरी सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ । एकातिर विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा वृद्वि भइ रहेको छ र ज्ञानका असिमित भण्डारहरू खुलेको छ भने अर्कोतिर विश्वका उत्पीडित राष्ट्रहरू र श्रमजीवी वर्गमाथि नयाँ रूपमा शोषण र शासन सुरु भएको छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा माइक्रोचिप (सुक्ष्म विद्युतीय परिपथ), कम्प्युटर, रोवोट, स्याटलाईट सञ्चार, अप्टिकल फाइवर, इन्टरनेट जस्ता इलेक्ट्रोनिक साधनहरूको प्रयोगले पुँजी, वस्तु र सेवा सवै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । यसले उत्पादन प्रणालीमा बिसौँ शताब्दीमा जस्तो ठूला ठूला उद्योग धन्दाहरू र यान्त्रिकीकरण होइन ज्ञान संंयन्त्र र स्वचालित प्रविधीको व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ । उत्पादन प्रणालीमा विशिष्टिकरण भएको छ । यस्तो प्राविधिक क्रान्तिले विचारको क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । वित्तीय पुंजीको भूमण्डलीकरणले श्रम र पुँजी दुबैको अन्तर्देशीय प्रवाह गराएको छ । त्यसैले २१ औँ शताब्दीले विभिन्न देशहरूका निम्ति समाजवाद प्रयोगका पनि नयाँ तरिका, प्रकृया र बाटाहरू खोलेका छन् । आज विश्वमा समाजवाद प्रयोगको एक मात्र बाटो छैन । हामीले पनि नेपाली विशेषतायुक्त सम्मुनत समाजवादको बाटोको रूपमा सङ्घीय समाजवादको विकास गरेका छौँ । यसले राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको सार्वभौमिकता, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता लोकतन्त्रका साश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै
आत्मसात गर्ने छ ।त्यसको अलावा यस कार्यक्रमका थप विशेषताहरू निम्नानुसार छन् ः
२. सङ्घीय शासन ःसङ्घीयता भनेको राजकीय सत्ता तथा शासनाधिकार साझेदारीको सिद्धान्त हो । सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारमा राज्य सञ्चालन गरिने यस्तो व्यवस्थामा संवैधानिक रूपमा नै राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबिच सहकार्यात्मक रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने समानान्तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुने छन् भने प्रदेश मातहत स्थानीय तहहरू हुने छन् । देशको विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार संवैधानिक रूपमै सङ्घ र प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरू (स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्रमा बाँडफाँट गरिने छ । प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको हीत रक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
३. समाजवादी व्यवस्था ःसमाजवादउत्पादनका साधनहरूमा सामाजिकीकरण भएको व्यवस्थाहो, जहाँ वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण सामाजिक नियन्त्रणको माध्यमबाट गरिन्छ । समाजवादमा देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूले आ–आफ्नो योग्यताअनुसारको काम र आप्mनो योगदानअनुसारको हिस्सा प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ । समाजवादको अर्थ–राजनीतिक दिशा चरणवद्व रूपमा समाजको रूपान्तरण गर्नु हो । वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको समाजवादमा राजकीय, सहकारी र निजी स्वरूप भएको मिश्रित स्वामित्व प्रणाली हुने छ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको जग निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने हाम्रो रणनीतिक बाटो हुने छ । वर्तमान क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक ढाँचामा चरणवद्व रूपमा परिवर्तन गरिने छ । बजार र योजनाबद्व विकासको समन्वय हुने यस्तो अर्थतन्त्रमा पहिलो चरणमा समाजवाद उन्मुख, दोश्रो चरणमा समाजवादमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र र तेश्रो चरणमा समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति लिइने छ । विकासमा समुदायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
४. सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र ःनेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा परम्परागत उदार लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको छ । यस्तो लोकतन्त्रमा राजनीतिक रूपमा सम्भ्रान्तहरूले देश चलाई रहेका हुन्छन् । त्यसैले बहुराष्ट्रिय मुलुकमा विभिन्न राष्ट्रियताका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने विधि सुरक्षित गर्नका लागि सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता छ । यो सबै वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका समुदायहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश गर्ने लोकतान्त्रिक अवधारणा हो । यस्तो लोकतन्त्रमा बहुमत समुदायको मात्र नभएर अल्पमत, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समेत समावेश र प्रतिनिधित्व गराइने छ । देशको राजकीय तथा सार्वजनिक मामलामा देशका सम्पूर्र्ण समुदायहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट समान अधिकार दिइने छ ।
सामाजिकन्याय समाजमाविद्यमान सबैखाले अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य र देशको स्रोत, साधन र शक्तिमा सबै नागरिकहरूको समानपहुँचहुने सामाजिकआर्थिक व्यवस्थाहो । यस्तो न्यायपूर्ण समाजनिर्माणका लागि समाजभित्रधन, अवसर र सुविधाको वितरणमा सबैको समानपहुँचहुने व्यवस्था गरिने छ । आर्थिक स्रोत र साधनतथाशक्तिवितरणमा निष्पक्षता, स्वतन्त्रएवम् निष्पक्षन्याय प्रणाली, समान राजनीतिक र संंवैधानिकअधिकारको प्रत्याभूति गरिने छ । सीमान्तकृत तथाबहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको संरक्षण तथाविपन्नमाथिको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गरिने छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङगीय सबैखाले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरिने छ ।
७.समतामूलक समृद्वि ः नेपाललाई समृद्व र सुखी मुलुकमा रूपान्तरण गर्नु र त्यसको फल समन्यायिक रूपमा वितरण गर्नु समतामूलक समृद्धि हो । देशको उत्पादकत्व वृद्धि भएन भने समन्यायिक वितरण सम्भव हुन्न । त्यसैले सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा सामाजिक न्याय सहितको तीव्र आर्थिक वृद्विको नीति अनुसरण गरिने छ । मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय सबैखाले विभेद अन्त्य गरी वहिस्करणमा पारिएका समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गरिने छ । देश धनी भए पनि धन, अवसर र सुविधाको समन्यायिक वितरण भएन भने जनता गरिवीबाट मुक्त हुँदैन । त्यसैले यस्तो प्रकृतिको समाजवादी व्यवस्थामा देशको उत्पादकत्वको वृद्धि, नागरिकहरूका बिच अवसरको समानता र धन सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण गरिने छ ।
१०. समानुपातिक समावेशीकरण ःदेशको राजकीय तथा सार्वजनिक मामलामा सम्पूर्र्ण समुदायहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताको माध्यमबाट समान अधिकार दिनु समानुपातिक समावशीकरण हो । यस नीतिअनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, आर्य, शिल्पी÷दलित, मुस्लिम लगायतका सबै जाति÷समुदायहरूलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायहरूमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराइने छ । ती क्लष्टरहरूको प्रतिनिधित्व गराउँदा महिला, फरक क्षमता भएका समूह, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व तथा समानुपातिक समावेशीबाट नसमेटिएका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न अङ्गमा आरक्षण र कोटा प्रणालीको माध्यमले समावेशी बनाइने छ ।
११. स्वशासन तथा स्वायत्तता ःबहुराष्ट्रिय मुलुकको सङ्घीय शासनमा प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरूलाई आफ्नो लागि आफैले शासन गर्ने वा सरकार सञ्चालन गर्ने तथा राजकीय तथा सार्वजनिक मामलाहरूमा बाह्य नियन्त्रण वा हस्तक्षेपबिना आफूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आफैले निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुने छ । यस्ता संरचनाहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारका साथै आफ्नो आधारभूत कानुन आफै बनाउने, संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने, त्यसलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कार्यान्वयन गर्ने, मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू परिचालन गर्ने, विकास निर्माण गर्ने लगायतका अधिकारहरू हुने छन् ।
१२. सांस्कृतिक बहुलता ः राज्यले बहुसंस्कृतिवादको मान्यता अनुरूप जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने छ । भाषा, संस्कृति र सभ्यता राष्ट्रिय पहिचानको मूल आधार भएकाले त्यसमा कुनै पनि राष्ट्रियताहरूलाई एकाधिकार र विशेषाधिकार दिइने छैन । राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायका सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिने छ । बहुधार्मिक मुलुक भएकाले प्रत्येक नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता हुने छ भने राज्य धर्म निरपेक्ष हुने छ । त्यसरी नै सबैको संस्कृति र सभ्यतालाई राज्यले समान मान्यता प्रदान गर्ने छ।
१३. समानुपातिकनिर्वाचन प्रणाली ः सम्मुनत सङ्घीय समाजवादीव्यवस्थामा सत्ताको आधार भनेकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीजनताको अभिमतहो, जो आवधिकनिर्वाचनको माध्यमबाट अभिव्यक्त हुन्छ । नेपालले अहिले अपनाएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले यहाँका उत्पीडित राष्टियताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अपनाइएको पहिलो हुने निर्वाचितहुने निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तखर्चिलो पनि छ । यस्तो व्यवस्थामाश्रमजीवी, गरिव, महिला, शिल्पी÷दलिततथाअल्पसङ्ख्यक समुदायहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन सक्दैन । समानुपातिक सूचीतर्फ पनि धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू देखापरेका छन् । यस्तो विकृतिविसंगतीहरूलाई हटाउँदै सङ्घीय समाजवादीव्यवस्थामा सबै तहको निर्वाचन समानुपातिकनिर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
१४. पर्यावरणीय सन्तुलन वर्तमानविश्वमातीब्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण र त्यसबाट उत्पन्नहुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषणका अदिका कारण तापमान बृद्धि भई मानवसामु ठूलो समस्याउत्पन्नभईरहेको छ । प्राकृतिकविपद्ले जताततै विनाशनिम्त्याइरहेको छ । औद्योगिकरणका नाममाशक्ति राष्ट्रहरूले उत्पादन गरेको कार्बनडाइअक्साईड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, सल्फो डाइ अक्साइड, आदियसकालागिजिम्मेवार छन् । वनजङ्गलको विनास, कोइला, खनीजजन्यइन्धनको अत्याधिकप्रयोग आदिका कारण पनिजलवायु परिवर्तन भइरहेका छन् । यसले नेपालमापनिविनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिकविपदको जोखिम समेत बढिरहेको छ । यसले मानव सभ्यता र पृथ्वीको प्राकृतिकअवस्थानै समाप्तहुने चिन्ता बढिरहेको छ । त्यसैले समाजवादीव्यवस्थामापर्यावरण सन्तुलनकालागि ठोस कदमचालिने छ । पर्यावरणको समस्याहल गर्नका लागिविश्वव्यापीअभियानचलाइने छ ।
नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम, समावेशी, लोकतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष, सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रात्मक बहुराष्ट्रिय राज्य हुने छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सबै तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरू सञ्चालन हुने छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यता अनुरूप सङ्घमा वालिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति हुने छ भने प्रदेश, विशेष संरचना र स्थानीय तहमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने छ । लोक सम्प्रभुता स्थापित गरिने छ । कुनै पनिव्यक्तिदुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुननपाउने व्यवस्थागरिने छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमामन्त्री परिषद बनाउने छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरू मध्येबाट नियुक्त गरिने छन् । सङ्घीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीयतहका सरकारहरूबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने छन् ।आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र–२००७, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू र आइएलओ महासन्धि १६९ लागू गरिने छ । कार्य क्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको वस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरू भएमा सबै तहका सरकारको पदाधिकारीहरूमाथि संविधानमाव्यवस्थाभएवमोजीमप्रत्याह्वानगर्न वामहाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्थागरिने छ ।
देशको सम्पूर्ण भूमि, प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनका साधनहरू सामाजिक कार्यका लागि उपयोग गरिने सार्वजनिक सम्पति हुने छन् । यस्ता साधनहरू स्थिति हेरी सामुदायिक, सहकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहने छन् ।समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र अपनाइने छ । महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रलाई राजकीय स्वामित्व वा वलियोराजकीय नियमन, रेखदेखमा ल्याइने छ । विशेषतः राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधारविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रलाई सार्वजनिक स्वामित्वर दायित्वभित्र राखिने छ । बाँकी क्षेत्रलाई सहकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहन दिइने छ ।राजकीय, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाली अर्थतन्त्रको विकास गरिने छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइने छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्राउन लगानीमैत्री वातावरण बनाइने छ । राज्य र निजी क्षेत्रको सहयोगात्मक भूमिकाको आधारमा देशलाई औद्योगीकरण गर्ने नीति लिइने छ ।सामुदायिक उत्पादन र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने छ । उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गरिने छ । कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गरिने छ । भूमिको उत्पादकत्व र सामाजिक न्याय समेतका आधारमा समग्र भू–उपयोग नीति निर्माण गरिने छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको दीगो उपयोग र उर्जा विकास अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य पक्ष हुने छ । पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन दिइने छैन । जनताको पर्यावरणीय अधिकारको संरक्षण गरिने छ ।
सांस्कृतिक क्षेत्रमापरम्परागत एकल संस्कृतिको प्रभुत्व समाप्त गरी बहुसंस्कृतिवादको मान्यता अनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवद्र्वन गरिने छ । समाजको बहुलतायुक्त चरित्र अनुरूप सांस्कृतिक सम्पदा र सम्पत्तिहरूको संवद्र्वन गर्दै सांस्कृतिक समृद्वि हासिल गर्न जोड दिइने छ । मुलुकको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जैविक विविधताको संरक्षण र संवद्र्वन गरिने छ । राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा फरक भएको आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्ने छैन । वैज्ञानिक र प्रगतिवादी साहित्य, संस्कृति, कला, सङ्गीत, चलचित्र आदिको प्रवद्र्वन गरिने छ । सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दा सामन्ती सोपान, रुढीवादी, अन्धविश्वास, अश्लील र छाडा संस्कृतिको मात्र होइन आधुनिकताको नाममा उपयोगितावादी, उपभोगवादी जीवन प्रणालीलाई पनि निरुत्साहित गरिने छ । युग सुहाउँदो ज्ञान, विज्ञान, अनुसन्धान, आविष्कारलाई प्रोत्साहितगरिने छ ।काम गर्नुलाई सानो ठान्ने, हेलोहोचो गर्ने र काम ठग्नेलाई ठूलो, ठालु ठान्ने प्रचलनका विरुद्व अभियान सञ्चालन गरिने छ । सादा जीवनलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रम संस्कृतिको निर्माण गर्ने, विलासी जीवन पद्वतिलाईनिरुत्साहित गर्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्वन गर्ने काम गरिने छ ।
हामी अहिले देशमा नयाँ वैकल्पीक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने महान अभियानमा जुटि रहेका छौँ । पुरानो विचार बोकेर बैकल्पीक राजनीतिक शक्ति निर्माण हुँदैन । देशले विकास, सुशासन र समृद्वि खोजको छ । नेपाली जनताले उत्पीडनबाट मुक्ति खोजेको छ । पुराना, परम्परागत दलहरूबाट यो अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले हामीलाई यस्तो राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ जुन विचार, सङ्गठन र कार्यशैलीको हिसावले नयाँ ढङ्गको होस । पुराना पार्टीहरू भन्दा भिन्न हरेक क्षेत्रमा आप्mनो अलग विकल्प भएको पार्टी होस । यस्तो पार्टी सङ्घीय ढाँचाको र लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अप्नाएको हुनु पर्दछ । पुराना पार्टीहरू जस्तो एकल जातीय नेतृत्व र वर्चस्व भएको होइन, राष्ट्रिय चरित्रको, समानुपातिक समावेशी र प्रत्यक्ष रूपमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचित भएको हुनु पर्दछ । कार्यर्शलीको हिसावले पनि सिद्धान्त र व्यवहारबिच एकत्व भएको र नीति प्रधान हुनु पर्दछ । त्यस्तो भयो भने मात्रै एकाइसौँ शताव्दीको चुनौति सामना गर्न सक्ने पार्टी बन्न सक्दछ । देश र जनताको यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न तथा परिवर्तनका बाहक श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको इच्छा र आकाङ्क्षालाई साकार पार्न यो गौरवमय एकीकरण कार्य सम्पन्न भएको छ ।यो एकीकरणसँग पार्टीको अग्रगति र प्रगति मात्र होइन देशकै भविष्य पनि जोडिएको छ । त्यसैले हाम्रासामु जतिसुकै विध्न वाधा आए पनि त्यसलाई पञ्छाएर अगाडी बढ्ने हिम्मत गर्नै पर्छ । अतः आउनु होस्, नयाँ बैकल्पीक राजनीतिक शक्ति निर्माणको महान् अभियानमा हातमा–हात काँधमा–काँध मिलाई सरिक होआँै, नेपाली जनताको समृद्व सङ्घीय समाजवादी मुलुक बनाउने युगौँ युगको सपना पूरा गर्न नयाँ सङ्कल्प गरौँ ।